Xfce 4.14 desktop ပတ်ဝန်းကျင်၏ဗားရှင်းသစ်ကိုဖြန့်ချိခဲ့သည် Linux မှ
Xfce 4.14 desktop ပတ်ဝန်းကျင်၏မူကွဲအသစ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
လေးနှစ်ကျော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးနောက် Xfce 4.14 Desktop ပတ်ဝန်းကျင်၏မူကွဲအသစ်ကိုထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်း၏လုပ်ငန်းအတွက်အနည်းဆုံး system အရင်းအမြစ်များလိုအပ်သည့်ဂန္ထဝင် desktop တစ်ခုကိုထောက်ပံ့ရန်ရည်ရွယ်သည်။
Xfce တွင်အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်နေသောအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည် အရာ, ဆန္ဒရှိလျှင်, အခြားစီမံကိန်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်: ပြတင်းပေါက် manager, application launcher, display manager, တစ် ဦး က session မန်နေဂျာနှင့်ပါဝါစီမံခန့်ခွဲမှုတစ် ဦး Thunar ဖိုင်မန်နေဂျာ၊ Midori ဝဘ်ဘရောက်ဇာparole media player၊ mousepad text editor နှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ဖွဲ့စည်းမှုစနစ်။
Xfce 4.14 မှာဘာအသစ်တွေလဲ?
xfwm4 မန်နေဂျာ၏ဤမူကွဲအသစ်တွင်၊ OpenGL မှတဆင့် vsync ထည့်သွင်းခဲ့သည်, libepoxy နှင့် DRI3 / Present တို့ကိုထောက်ခံမှုပေါ်လာပြီး GLX ကို Xrender အစားအသုံးပြုခဲ့သည်။
output ကွာဟမှု (မျက်ရည်) ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုထောက်ပံ့ဖို့ frame ကို blanking သွေးခုန်နှုန်း (vblank) နဲ့ထပ်တူပြုခြင်းအပြောင်းအလဲနဲ့။ အသစ် GTK3 စကေးစွမ်းရည်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်၎င်းသည် pixel သိပ်သည်းဆ (HiDPI) နှင့်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်တိုးတက်မှုကိုခွင့်ပြုခဲ့သည်။
စီးပွားဖြစ် NVIDIA drivers များကိုအသုံးပြုသောအခါ GLX အထောက်အပံ့ကိုတိုးတက်ခဲ့သည်။ XInput2 ထည့်သွင်းမှုစနစ်အတွက်ပံ့ပိုးမှုပေးသည်။ ပုံစံအသစ်တစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
Colf backend အသစ်ကို xfce4-settings configurator တွင်ထည့်သွင်းထားသည် အရောင် profile များကိုအသုံးပြု။ မှန်ကန်သောအရောင်ကိုယ်စားပြုမှုကိုသတ်မှတ်ရန်။ backend သည်သင်အားစက်ရုံပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်းအတွက်အရောင်စီမံခန့်ခွဲမှုအထောက်အပံ့ပေးသည်။ မော်နီတာများ၏အရောင်ဆိုင်ရာ profiles များကိုအသုံးပြုရန် xiccd ကဲ့သို့သောအပို ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုသင်တပ်ဆင်ရမည်။
Xfce 4.14 သည် themes များဖန်တီးရာတွင်အသုံးပြုရန် CSS style အတန်းအသစ်များကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်ဥပမာအားဖြင့်၊ သီးခြားခလုတ်များ ထပ်မံ၍ ၀ င်းဒိုးအုပ်စုများနှင့်စစ်မျက်နှာပြင်နှင့်အလျားလိုက်နေရာချထားမှုအတွက်တိကျသောချိန်ညှိချက်များနှင့်လုပ်ဆောင်ရန်ထည့်သွင်းထားသည်။ panel ၏ plugins များနှင့် application များတွင်символသင်္ကေတများပါဝင်သည်။
အခြေခံဖွဲ့စည်းမှုတွင် Dashboard Profiles utility ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အား panel အတွင်းရှိ element ဒီဇိုင်း profile များကိုဖန်တီးရန်၊ ကယ်တင်ရန်နှင့် load လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်
xfce4-session session manager သည် startup တွင်မှီခိုမှုကွင်းဆက်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ခွင့်ပြုသည့် ဦး စားပေးအုပ်စုများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကာ application များကိုစတင်ခြင်းအတွက်အထောက်အပံ့ပေးသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် တိုးတက်လာသောပါဝါစီမံခန့်ခွဲမှု interface (xfce4-power-manager)ဘက်ထရီအားနည်းချက်သတိပေးချက်မရှိတော့သည့်အတွက်စာရေးကိရိယာစနစ်များအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်အထောက်အပံ့နှင့်အတူ။
မှတ်တမ်းတွင်ရောင်ပြန်ဟပ်ရန် xfce4-notification တွင်ကူးစက်ခံထားရသော power supply စနစ်နှင့်သက်ဆိုင်သောဖြစ်ရပ်များကိုထပ်မံစီစစ်ခြင်း (ဥပမာအားဖြင့်၊ အလင်းရောင်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ရပ်များကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းမရှိပါ) ။ XF86Battery ခလုတ်ကိုနှိပ်သောအခါ power management interface ကိုခေါ်ဆိုနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုထည့်သွင်းပေးခဲ့သည်။
dashboard plugin တွင်ကျန်ရှိနေသေးသောဘက်ထရီသက်တမ်းနှင့်အားသွင်းမှုရာခိုင်နှုန်းကိုပြသရန်ရွေးချယ်စရာများကိုထည့်သွင်းထားသည်။
Thunar ဖိုင်မန်နေဂျာကိုပြင်ဆင်ပြီးပြီ ဘယ်မှာဖိုင်လမ်းကြောင်းကိုပြသခြင်း panel ကိုလုံးဝဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည်ရှိရာ။
ထို့အပြင် Thunar Plugin API ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ထားသည် (thunarx) သည် GObject ၏စူးစမ်းလေ့လာမှုနှင့်ပရိုဂရမ်ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးတွင်ဖိုလ်ဒါများအသုံးပြုခြင်းကိုထောက်ပံ့သည်။ ဖိုင်၏အရွယ်အစားကို bytes ဖြင့်ပြသည်။
အသုံးပြုသူသတ်မှတ်ထားသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ဆောင်ရန် Controllers ကိုယခုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ပြင်ပကွန်ယက်အရင်းအမြစ်များအတွက် Thunar UCA (User Configurable Actions) ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ စတိုင်နှင့် interface ၏ optimization ။
PulseAudio အခြေပြု panel မှအသံထိန်းချုပ်မှုပလပ်အင်သည် MPRIS2 ပရိုတိုကောကိုထောက်ခံသည် မီဒီယာဖွင့်စက်များပေါ်တွင်ပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုအဝေးမှထိန်းချုပ်သည်။ Multimedia keys များကို desktop တစ်ခုလုံးတွင်အသုံးပြုနိုင်သည် (အပို xfce4-volumed-pulse နောက်ခံလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်သည်) ။
ဒီလွှတ်တင်မှုအကြောင်းသင်ပိုမိုသိလိုပါကသင်တိုင်ပင်နိုင်သည် အောက်ပါ link ကို.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » Xfce 4.14 desktop ပတ်ဝန်းကျင်၏မူကွဲအသစ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
Daniel Aragon ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းတယ် ငါပူစီနံ ၁၉.၂ စည်ပိုင်းရှိသည် လာမည့်အောက်တိုဘာလဖြန့်ချိမှုကိုမစောင့်ဘဲ xfce ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်နည်းလမ်းရှိပါသလား။
Manjaro သည်သင်အား FreeOffice နှင့် LibreOffice အကြားရွေးချယ်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်
Ubuntu 18.04.3 LTS တတိယအဆင့်မြှင့်တင်မှု